श्रीमती लाई बि’ग्रन नदिन ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु - Samachar Post Dainik
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् ।
श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको म’स्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सा’स्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग म’स्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् ।
प्राय आफ्नै लापर’बाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पी’डितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त । बिदेशमा गएका पु’रुष हरुको प्राय घर बि’ग्रिनु ।
समाचारहरु हेर्दा ग’लत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।
श्रीमतीका हरेक भनाइमा च’नाखो रहनुहोस् । उनलाई व्यस्त राख्नुहोस् किनकी उनले नानाथरी कुरा दिमागमा आउने अवस्था नबनाउनुहोस् । उनि के गर्दै छिन् ,कहाँ जादै छिन् किन जादै छिन् , हरेक कुरो को जानकारी लिने गर्नुपर्छ । धेरै माया गर्छु भन्दैमा धेरै विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन ।
आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतिलाई घरपरिवारसंगै राख्नुहोस् ।
सक्नुहुन्छ गाउँमै लगेर राख्नुहोस् । आमा बाबुसंग, शहर केन्द्रित ठाउँमा एक्लै नछाड्नुहोस् । यदी शहरमा राख्नै पर्ने बा’ध्यता भए उनीप्रति च’नाखो बन्नुहोस् । उनको बारेमा जानकारी लिने माध्याम बनाएरै जानुहोस् ।
बुहारी भित्र्याएपछि सासु बुहारीको झ’गडा परे पनि यो क्षणिक श्रीमान श्रीमतिको झ’गडा जस्तै हो । बुहारीसंग सासु नबोली पनि ती तपाईकी आमा हुन् । उनले तपाईको कहिल्यै कु’भलो चिताउँदिनन् ।
त्यस्तैले श्रीमतीलाई भन्दाबढी आमा बाबुलाई बढी विश्वास गर्नुहोस् । श्रीमतीको विश्वासमा घरबार बि’गार्नेहरुको नै आफ्नै घरबार धेरै बि’ग्रिएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन्
त्यस प्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ?
ठा’डो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रि’साएर फोन का’ट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै ए’कासी झ’र्किने ,रिसा’उने गर्छन भने शं’का गर्नैपर्छ ।
असल श्रमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ ।
प्रकाशित मिति २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार १३:४३